Afarta dhinac ee laga fiirsanayo batteriga ku jira Android | Androidsis
Waxyaabaha baytariga ah ee maskaxda lagu hayo marka aad iibsaneyso taleefanka Android
Eder Ferreño | | Batariga, Tababarada
Batarigu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah taleefankeena Android. Sidaa darteed, markaan iibsaneyno taleefan cusub, waa arrin ay tahay inaan marwalba maskaxda ku hayno. Gaar ahaan markaad iibsaneyso taleefan cusub, marka lagu daro dhinacyo kale oo badan. Laakiin goobtani waa midda ay tahay inaan u istaagno inaan ka fikirno oo aan dhawrno dhinacyo kala duwan.
Tan iyo markii aan marwalba u maleynay in bateriga weyn ee qalabka Android ee su'aasha laga qabo, madax-bannaanida aan yeelan doono. Iyadoo ay jiraan cunsurro badan oo saamayn ku leh is-maamul. Sidaa darteed, waa inaan u fiirso taxane dhinacyo ah oo ku saabsan batteriga, marka aad iibsaneyso taleefan cusub.
3 Noocyada xamuulka
Mid ka mid ah dhinacyada ugu horeeya ee ay tahay inaan marwalba tixgalino waa ismaamulka batteriga, laakiin laxiriira waa amperiaje. Muuqaalka ugu muhiimsan ee batteriga ku jira Android waa awooda keydinta tamarta, wax lagu cabiro amps ama milliamps kiiskan.
Waa tirada aan sida caadiga ah aragno ee loo adeegsado in lagu muujiyo awooddeeda, sida 4.200 Mah oo ku jirta sawirka kore. Tani waxay noo sheegaysaa inta tamar ee ay awood u leedahay inay qarin karto. Waxa ugu badan ee caadiga ahi waa in haddii tiradu ka badan tahay, is-maamulku wuxuu ahaan doonaa mid xoogaa ka sarreeya, inkasta oo ay jiraan dhinacyo badan oo saameyn ku leh dareenkan. Laakiin waxa caadiga ah waa inaan ku sharraxno qaab leh bateri weyn.
In kasta oo awoodda ka weyn loo tarjumay xaalado badan halka Taleefanka Android waa ka culus yahay oo ka sii dhumuc weyn yahay. Uguyaraan baytariyada hadda jirta awgood, laakiin waxaa lafilayaa taas noocyo cusub oo la soo saaray, ayaa joojin doonta dhibaatada. Laakiin waa muhiim inaan xisaabta ku darsanno, maxaa yeelay haddii kale taleefanka ayaa naga dhumuc weyn.
Muuqaal kale oo aad muhiim u noqday maanta waa nooca isku xiraha. Muddo ka hor, isku xirayaasha ku jira Android waxay ahaayeen wax ka badan ama ka yar isku mid, tan iyo markii ku dhowaad dhammaan moodooyinka la adeegsaday isku xira micro micro. Laakiin tani si muuqata ayey isu beddeshay, iyadoo fursadaha cusub sida nooca USB-C. Maaddaama ay leedahay faa'iidooyin badan, sida dib u noqoshada iyo awood u yeelashada inay ku soo rogto qalab kale. In kasta oo horumarkiisu gaabis yahay.
Sidaa darteed, weli waan helnaa moodooyinka leh isku xiraha micro USB iyo kuwa kale oo leh isku xira USB Type-C. Wax macaamiisha u noqon kara jahwareer, maxaa yeelay ma garanayaan waxa ay doortaan. Iyada oo indhaha lagu hayo dhexdhexaadka iyo muddada dheer, Nooca-C ayaa noqon kara xulashada ugu fiican ee la dooran karo.
Lacag-bixin deg-deg ah iyo lacag-la'aan wireless ayaa ku sii jeeda suuqa. Laba ikhtiyaar oo caan ka ah dadka isticmaala Android. Maxaa intaa ka badan, noocyada lacag bixinta degdegga ah way sii kordhayaan. Way fiicantahay in la hubiyo in taleefanka aad xiiseyneyso uu leeyahay batteri taageeraya kuleylka degdegga ah ama haddii taleefanka uu la jaan qaadayo lacag-bixinta wireless-ka ah. Waa laba ikhtiyaar oo u yimid inay ku sii nagaadaan suuqa taleefanka.
Marka lagu daro inaad si aad ah waxtar u leh wakhti kasta awoodo inaad ku dalacdo batteriga taleefankaaga. Gaar ahaan xawaareynta degdegga ah waxay fure u noqon kartaa xaaladaha noocan ah, marka ay tahay inaad lacag ka qaaddo batteriga oo aad deg deg tahay. Waxaad ku heli kartaa boqolkiiba wanaagsan oo lacag ah dhowr daqiiqo gudahood.
Ugu dambeyntiina, lakabka qaabeynta ee uu isticmaalo taleefanka Android ee aad xiiseyneyso ayaa fure u noqon kara. Maaddaama nooc kasta inta badan soo bandhigo a taxane ah oo ikhtiyaarro dheeri ah loogu talagalay batteriga. Marka waxaa jira qaar kuu oggolaanaya inaad si wanaagsan uga faa'iidaysato batteriga taleefankaaga. Ama waxay leeyihiin habab badan oo kala duwan oo ay ku maareeyaan.
Waayo, way fiicantahay in laga feejignaado noocyada noocan ah. Tan iyo hadday baterigu yahay wax si aad ah nooga walwalsan, waxaa laga yaabaa inay wax weyn noo tarayso markay tahay go'aaminta taleefanka noogu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Waxyaabaha baytariga ah ee maskaxda lagu hayo marka aad iibsaneyso taleefanka Android
Huawei P30 wuxuu lahaan doonaa kamarad seddex geesood ah oo leh taageero 5X Zoom oo aan khasaare lahayn
Samsung waxay diyaarineysaa 'Habeenkii Bright' si ay u qaadaan sawiro ka fiican habeenki bilaa iftiinka